SAWIRO:- Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyay Gobolka Gedo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada SAWIRO:- Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyay Gobolka Gedo
SAWIRO:- Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyay Gobolka Gedo
Ciidamada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee ka howlgalla Gobolka Gedo ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo amni xaaiijin ah ka sameeyeen Xaafado ka tirsan degmada Baardheere ee Gobolkaasi Gedo.
Howlgalka oo uu hoggaaminayay Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baardheere Faarax Cabdinuur Turbac ayaa waxaa ciidamadu sigaar ah uga filiyeen xaafadaha, Kaskeey, Buulo Kuulow iyo Kurman, waxaana lagu qabqabray dhalinyaro farabadan oo laga shakiyay walow markii dambe badi la siidaayay.
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Baardheere Faarax Cabdinuur tmTurbac ayaa sheegay in howlgalka Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay uu socday, isla markaana haatan ay sii wadi doonaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay jiraan Ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray sugida Amniga degmada Baardheere, la socoshada dhaq dhaqaaqyada kajira degmada iyo qabqabashads dadka aan la aqoon, kuwaas oo ka kooban sadexda Ciidan ee ka howlgasho Degmada Baardheere.
Degmada Baardheere ayaa waxaa dhawaan ka dhacay qarax ay dimasho igo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.